Khuphela i-AutoCAD 2009 mahala -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Landa i-AutoCAD 2009 mahala
AutoDesk uye wazisa ukukwazi ukukhuphela inguqu epheleleyo ye-AutoCAD 2009 Raptor kunye ne-AutoCAD 2009 LT.
Le nguqulo isebenze kwiintsuku ze-30, ezifumaneka namhlanje namhlanje 25 Matshi we-2008, indlela yabasebenzisi ukuzama imisebenzi entsha ye 2009 version.
Yiyiphi i-AutoDesk ejonga ngale nto:
1. Zama abasebenzisi abatsha ukuba bazame
Abona bafundi be-geeky, nee-Ipods zabo, Hi5! kunye nendlela yokuphila exhomekeke kwi-Twitter ngabagqatswa bokuqala abajongwa yi-AutoDesk, ukuze bakwazi ukuziqhelanisa nesitayile sabo esitsha. Kwaye nangona aba bafundi benazo iinguqulelo zasimahla ukuba baneakhawunti ye-imeyile ye-Unversidad, kwaye abanye baphanga iilayisensi ... ngabaxhasi bexesha elizayo kwiimveliso zeYunivesithi. I-teknoloji ye-25 iminyaka.
Ukuba unayo i-akhawunti yunivesithi, bhalisa uze ufumane i-AutoCAD apha
2. Zama ukweyisela abangakholwayo
Phakathi kwemiba egxekwe kakhulu ngobuninzi babasebenzisi abanamava kukunyanzelwa kwe-AutoDesk ukuba ivuselele yonke iminyaka emihlanu kwaye yenze isoftware enye ngexabiso eliphezulu lokufuna imithombo yolwazi engaphezulu ... ethi kwiintsuku ezininzi ichaphazele umsebenzi wokubonisa. Endaweni yokwenza i-AutoCAD ijongeke njengeOfisi 2007 kunye neWindows Vista, uninzi lwethu lunokukhetha ukuphucula unikezelo, ukuphatha raster kunye namandla e-3D.
3. Ukufuna ukubetha abo sikhuphisana nabo ngamandla
Iminyaka emibili edlulileyo, apho iMicrosoft kunye ne-Yahoo ibone ukulahlekelwa ngumhlaba kumncintiswano omtsha kunye nabadala abaye baphumelela ukusinda baye benza ukuba i-AutoDesk ifune ukubuyisela ubugwenxa usebenzisa isikhali esisebenzele kangangoko: ubuqhetseba kumazwe angenakuchukumisa kunye nokuxhomekeka kumazwe asenokwenzeka. Oko kukunceda njengoko kuyinkcitho eyimfuneko kwiinkampani ezinzulu eCarlifonia kodwa imali engafikelelekiyo kwiinkampani ezifanayo ezinkulu eQuito ... ayisiyiyo ukuba ayifanelekanga, kodwa ukuba ukwakheka kwakho kuhlala unyaka kuphela.
Kungekudala, i-AutoDesk yanikela iBentley ngokunciphisa, kuthatha isibonelelo esibalulekileyo kwisakhiwo esitsha; ngelixa lifuna ukulwa nomhlaba we geospatial ESRI, ngubani okwangoku ngoku ufuna ukuphucula ubuthathaka babo kwiphepha levol.
Ewe, a khuphela i sihloko sovavanyo... Ukujonga indlela kwiiforamu, iiHackers, ziyaqhayisa ngokwaphula imiqadi ... kwaye ngaphandle kokugxekwa rhoqo, iya kuqhubeka iyinkqubo yesoftware egcina uzinzo kwiteknoloji yeCAD, ngakumbi ngomfanekiso wobumbano (onayo) kunokwenziwa ( inokuphucula).
Olu khetho lufumaneka kuphela ukukhuphela eMelika nase Canada. Nazi ke iingcebiso zokuyifumana xa ungekho ngaphezulu kweRio Grande:
Okokuqala kukuzama ngokufaka idilesi esebenzayo yase-US, kwaye xa ubona isiqhagamshelo sokukhuphela, ukuba umnini-ntanethi wakho kumthengisi Ukusuka kwinkampani yaseNyakatho Melika okanye uvela kwiCybercafé unokuba nethamsanqa lokuba i-IP yakho ibonakale inendawo eMelika. Kwenzeka kum ukuba ndivele njengomsebenzisi weBismark ... emva koko ukhuphelo lwakho lwenziwe lwasebenza kuba le nkqubo ikuthatha njengomsebenzisi we-gringolandia.
Ukuba akunjalo, inkqubo iya kukuxelela ukuba ukhuphelo alufumaneki "kwamanye amazwe", ngoko ke unokhetho lokuya kwi-imeyile oyifumene ngelo xesha kwaye ucele enye indlela iDVD okanye iCD ithunyelwe kuwe. Kwimeko yam ndisebenzise oku ngokusebenzisa "ibhokisi yeposi" okanye "i-aerocasilla", ezo zezo nkonzo ezinikezelwa ziinkampani ezininzi kumazwe ase-Hispanic, apho zibonelela ngebhokisi elibonakalayo e-United States.
Kwaye ukuba awungekhe wenze nokuba ... uxolo, i-AutoDesk ithathela ingqalelo ukuba ilizwe lakho linikezwe ubuninzi 🙂 ke ayisiyo ntengiso ethembekileyo, ke unayo enye indlela yokufumana idilesi ye-imeyile yaseyunivesithi, kuba kukho amaphepha-mvume. yabafundi
Ngoko kuya kuxhomekeka kwilizwe apho ukhona, zama ukufumana apha
Iibhloko ezininzi ze-AutoCAD
Kubafundi kukho inkolelo yemfundo, epheleleyo kwaye ingasetyenziselwa iminyaka ye-3.
Ufuna ukuyikhuphela http://students.autodesk.com
Umda wukuthi ulinganiselwe kwiinguqulelo ezintsha, andicinga ukuba unokukhuphela i-2008 version
Camilo Cruz Colombia uthi:
Molo, ndingumfana oselula ofuna ukufunda ukuphatha i-autocad kuba ndingumfundi waseyunivesithi kwaye ndingathanda ukuba uyinkampani eyaziwayo ukuba unike abafundi ithuba lokuba babe ne-autocad eyayingu-2008 okanye 2009 ngaphandle kweendleko zokuba yayikukunceda abo bafundi bafuna ukufunda.
Ndiyabuza ukuba babenomusa gqitha ukuwuthumela kum ekubeni ndiyidinga ukwenza umsebenzi we-landscaping work attector
Ukuba uyayisebenzisa ukuze uphile, ungayithenga i-ItelliCAD, iya kukuxabisa i-US $ 300, ngokuqinisekileyo ngomsebenzi onokuwuhlawula. Iya kukunika usetyenziso olufanayo, imiyalelo iyafana.
Kwaye ke uthatha uxanduva lokuba ungabhekiseli inkqubo, leyo yinxalenye yokuba neenjongo zokunqoba uxanduva.
Ndiyazi ukuba le nkqubo intle kakhulu kuwo onke amanqanaba.
Ndiyidingayo, inkqubo ye-Autocad ukwenza imisebenzi ukuze ukwazi ukuxhasa umbulelo
Sawubona, ndiyi-topographer. Ndibukeka kakuhle, ndingathanda ukuyikhuphela kwikhompyutheni yam, andinamava amaninzi kwaye ndifuna ukufunda, ukusuka eCiudad Guayana State eBolivar
Kubaluleke kakhulu ukubonga
Ndicinga ukuba le nkqubo inomdla kakhulu, ndiyathanda ukuyisebenzisa
Ndiyabulela inkxaso enkulu
Alfredo Rosales Perez uthi:
mkhulu, kodwa ndingayikhuphela njani mahhala ????
jose agustin iñacasha quilumba uthi:
Ndiyabulela kakhulu kuya kuba luncedo kakhulu kwiziko apho ndisebenza khona
mohamed fatmi uthi:
ngozuko olukhulu ukufumana le autocad yokukhuphela, kuyamangalisa andazi ukuba ndingayichaza njani, liphupha
Siyabonga kakhulu kuya kusetyenziswa kakuhle
kuphela kwiofisi ye-siat
Iividiyo zikaLulu zikhetho. Kodwa bahlawulwe, baxabisa njenge- $ 15
Unomdla kakhulu umboniso kunye nokulawulwa kwenkqubo.
dilso moreno uthi:
Okokuqala kobusuku obuhle. Ndiyakuvuyela ukukuphendula ngethuba lokucela ividiyo ukuze ufumane ulwazi oluthe xaxa malunga nokushayela.
Ngenxa yokuba ungakhangeli kwi-Daily AutoCAD, kukho ezininzi izikhokelo ze-3D
le imeyile yam, wendy_laloka@hotmail.com, ukuba umntu unokuncedisa, ndiza kuba nombulelo gqitha
Ndifuna uncedo nge autocad porfa ungithumelele i-imeyile eyazi, ndifuna ukwenza inxalenye ye-3D
ipos i sh ... !!!
kodwa ezinkulu, ezinkulu
ithuluzi eluncedo kakhulu loyilo
INGE FRANCISCO uthi:
Ndingayifunda njani ukuyisebenzisa Ndingathanda ukufunda ukuba ndiyi-topographer kodwa ndifuna ukufunda indlela yokuyisebenzisa
Inkqubo ilungile kwaye inceda kakhulu
Sawu, ndingathanda ukukhuphela i-autocad 2009 Ndingathanda ukuyila indlu yam njengokuba ndenza ukukhuphela kwenkqubo incedise i-porfas
Ukuba ubuya kuqeshwa ukuba uthathe uhambo lwabatyeleli, unokwenza ntoni?
Ukuba inqwelo yemoto kwaye uthabathe khona
-Buyifake kwaye uyihlawule ngesivumelwano
-Kubuyisele ixesha lokutyelela
-Internet ukuthumela enye kwi-imeyile yakho
Umbuzo kukuziphatha okuhle, ukuthengisa inkonzo kufuna ukuba noxanduva lokufezekisa oko kuthenjisiweyo, ukufunda i-AutoCAD ngokufanelekileyo kufuna uqeqesho, ukuhlawulela uqeqesho kunye nokufumana isoftware nokuba ibiza ngexabiso eliphantsi. Yile ndlela elisebenza ngayo ishishini, ukuba ufuna ukuthengisa iinkonzo zoyilo, thenga isoftware kwaye uyihlawule ngenzuzo oyakuyifumana kule minyaka izayo. Ukuba kubonakala kubiza kakhulu, kukho iinguqulelo ezilula, ezinye iimveliso zexabiso eliphantsi kunye nesoftware evulekileyo.
Ukuba ngaba ngeenjongo zemfundo, khuphela i-version yezilingo, thengela ilayisense yomfundi okanye i-yuyunivesiti ikunike ikopi.
Le bhlog ayinakukunceda ukuba uqhekeze i-AutoCAD, ayikho kumgaqo-nkqubo wokukhuthaza ukungekho semthethweni. Kuncinci ngeli xesha kukho ezinye iindlela zokuziphatha zokubonelela ngeenkonzo zobungcali.
... andizukuphanga isoftware yabanye, ngapha koko ndingathanda ukuba uyilo lwam luphangwe ...
… Ukuba ndinetalente, ukuthengisa ubuchule bam ndisebenzisa isoftware efana ne-AutoCAD: akufuneki na ukuba ndifumane indlela yokufumana ingxelo endinokufikelela kuyo, kwaye ehambelana nokuziphatha kwetalente yam?
… Ukuba ndiyazi ukuba ndiyakwazi ukuphatha i-AutoCAD kangangoko ndinako, ngaba ayikholosi ukuhlawula ikhosi elungileyo endaweni yesiqingatha sokufunda?
ALBERTO COUTIÑO uthi:
Ndiyavuselela uyile ipaki amanzi Chiapas, mna Kucetyiswa ke AutoCAD inkqubo kodwa andikwazi umxokozelo, ingandinceda download ukuthumela kum umyalezo ngeposi yam nceda, ndiyanibongoza ndingenanto 3 iinyanga ukuze bafunde ukuba bayisebenzise kwaye 3 ngakumbi ngenxa yokungeniswa kwaye iindleko zeprojekthi, mna kaPubliyo mali yaye wayesebenza plisssssssss unokontraka
Sawu, igama lam nguNestor, ndineminyaka eyi-18.
i-alos 17 ithatha i-autocad ne-inventor course
Ndiyathanda kakhulu ukubona nokudala izinto.
kodwa njengoko ndiqale ukufunda esikolweni esi sihloko siyishiya.
Emva koko ndifuna ukufumana ixesha elilahlekileyo kunye nokuguqulwa kwesi sihloko.
Ndifuna ukufunda okunye kwaye njengokuba ndine18 ngoku, ndifuna ukusebenza kule nto kwaye ngigxile kulolu hlobo lomsebenzi.
Ukuba umntu angandinceda ndibuyele kulo msebenzi ukhethekileyo kwaye ndifunde okungakumbi malunga ne-autocad kunye nomqambi wam kuya kufana nokwazi ngaphezulu kwendikuthandayo.
oscar calvache uthi:
Sawu, ndifuna ukwazi indlela yokukhuphela le-autocad 2009, ndiyidinga i-posilbe esheshayo.
u-mario alberto herrera lopez uthi:
Ndiyakunomdla kwi-saver ukuqhuba i-autocad kumsebenzi wam wokuyila
indlela inkqubo ye-auto cad 2009 ikhutshwe ngayo
Ngu fa ndifuna i-Autocad2009 ibaluleke kakhulu kum kuba ndifunda i-Architecture kwaye ndinokuhanjiswa kungekudala kwaye ndiyayidinga, KODWA NGOKU, kwaye andinakho ukuyikhuphela, ndicela undincede ndiza kukubulela kakhulu ..... imibuliso iSantiago ...
Nceda oloncedo akukho kuphinda download 2009 inkqubo AutoCAD kuba iluncedo kakhulu kwaye akunakwenzeka ukuba enze nasiphi na isakhiwo okanye ezinye imizobo ezinxulumene lwezakhiwo nceda uncede cm ndenze ntoni na ukuze umxokozelo porfa ukuba
Inkqubo ilungile kakhulu kumaphulo okudweba
Ezi ziinguqulelo zemfundo:
I-Autodesk AutoCAD LT 2009 iphumelele iDVD-yoMfundi eQhubeka U $ 148.95
I-Autodesk AutoCAD 2009 iphumelele iDVD-iZakhono zabafundi ezingapheliyo ze- $ U $ 364.95
Iinjongo zentengiso yeenjongo zokunciphisa mna ndikucebisa ubona oku kuthunyelwe apho kukho iindawo ezinxulumene nabasasazweni lakho.
ULuis Toapanta uthi:
Nceda usincede ngeendleko ze-autocad 2009
le vacan ndiyathanda indlela isebenza ngayo
I-installer ye-AutoCAD inyathelo elingaphezulu kwe-1 GB, kungekhona i-imeyile inkonzo evumela ukuthunyelwa kweefayili zolo hlobo.
Rodolfo Jim uthi:
Ungayithumela kwi-imeyile yam nceda uncede
Ndingayilanda njani i-autocat mahhala
Nceda uyithumele kwi-imeyile yam kuba andikwazi ukuyikhuphela kwaye ndiyidinga ngokungxamisekileyo
Sawubona, ndifuna ukukhuphela njani i-autocad ye-2009? Ndinemihla kule, ndingayilanda njani ikhululekile, nceda undixelele.
Alan Avila uthi:
i-chimba yazi indlela utshintsho olulanda ngayo le hahaha
Ndikwimeko enzima ... kwaye kunyanzelekile ukuba ube ne-Autocad 2009.
Siyabonga ngeenkonzo zakho.
Ndidinga ukufunda ukuze ndibone ukuba ndiyikhuphele kwaoko
carlos cardozo uthi:
Ndikhangeleka kakuhle inkqubo okanye inkonzo
le nkqubo inhle kakhulu
florin jorge uthi:
Ndifuna ukukhuphela i-autocad
Okanye ukuba umthunywa wakho uyavuma ukuthumela ifayile ye-1.4 GB
cristian jenapierre uthi:
Oe Ndifuna ukukhuphela i-autocat i nu Ndiyakwazi ukunceda ndithumelele umfana wam ndikucela
Qhubeka, akukho mntu ubanqandayo. Kodwa ubugebenga besoftware lulwaphulo-mthetho oluhlawulelwayo olunzima kakhulu. Ukuba awuyiboni into eyenzekileyo kwiRapidshare yokuvumela umxholo ongavumelekanga ukuba wabelwe
Ndifuna ukwenza izicwangciso zam ngokukhawuleza. ukuphucula umsebenzi wam.
Ndiyifunayo ukuphucula umsebenzi wam
Ndingathanda ukufunda i-autocad 2009, kuba umsebenzi wam usenziwa ngeendlela ezininzi zeeplani, ubuninzi beendawo ezinkulu kunye nezakhiwo zasemaphandleni.
Ndiya kuqonda ukundithumela incwadi kunye ne-software.
intle kakhulu pssss yintoni k keria
UJOSE LUIS E. uthi:
Ndifuna ukukhuphela i-autocad kwizenzo zesikolo
Mario Jesus Muñoz Angulo uthi:
Ndifuna uncedo ukukhuphela inkqubo ye-autocad kwiifestile vista
Ndifuna ukukhuphela inkqubo ehambelana neefestile vista
Inkqubo elungileyo kakhulu ... egqwesileyo ... iyasebenza kwaye yenziwe ...
fabian villanueva uthi:
aljandro muñiz sixtos uthi:
Inene yiprogram ebalaseleyo, kuba unokulawula imisebenzi yakho kwi-3D
uxolo lwe-yuli maritza uthi:
Kuhle kakhulu ukwenza umsebenzi kwi-3d
INYANISO LE NKQUBO YENZEKE NGOKWENYANISO; KWAM NDINGUMFUNDI WONYAKA WOKUGQIBELA WENKOSI YENKOSI YEMISEBENZI KWI-TSE Nº 15 YASE-FONTANA-CHACO, INYANISO YINKQUBO EBALULEKILEYO. SIYAYIVULELA
efren mendoza uthi:
Kulungile ukuba olu khetho luyafumaneka kule nkqubo
ilunge kakhulu kuthi abo bathanda ukuzoba
Porphyry Carmona uthi:
Esi sixhobo sibalaseleyo. Ndingathanda ukuthumela inkqubo ye-Auto Cad 2009 kwi-imeyile yam, ndazama ukukukhuphela kwikhompyutheni yam, kodwa andizange ndibe nomphumo owanelisayo.
Juan Diego uthi:
oku kuyamangalisa ... kwinjineli yoluntu yexesha elizayo
ibhonos nonbus autocad le comadre
akukho mame ndiyathanda u-autocad ukuba ndifungele kuwe thina hahaha
Ndingayikhuphela njani i-AutoCad2009 ...
Ndiyayidinga kwiprojekthi yokugqibela ...
JULIO CESAR SOTO uthi:
Ndifuna ngokukhawuleza ukuba ndikwazi ukuyikhuphela kwaye ndiya kuphinda ndiqalise umsebenzi wokwakha ubuchule - ndiyabonga kakhulu
Ndifuna ukukhuphela inkqubo ephuthumayo ye-AutoCad 2009 okanye nayiphi inguqulelo x fabor, i-esque ndiyenayo kwaye ndayicima xa ndiyifakela kwakhona ikhompyuter. Ndiyifunda kakhulu le nkqubo, ndinokubulela kakhulu.
Ndifuna i-autocad njengoko ndingayifumana mahhala
Hendry Martinez uthi:
Ndicinga ukuba lolona hlobo luhle luthathiweyo yidek
Ndifuna i-autocad ndiyithumele kum, siyabonga
ronald soda uthi:
Andiyazi ukuba ndingayilanda njani kodwa ndayimisa inkqubo enhle
IPEDRO MARCELO IARARAS uthi:
Ndiyabonga kakhulu undithumele, ndiya kukhonza
Ndifuna ukukhuphela ngokukhawuleza i-autocad ye-2009, nceda undixelele indlela, mbulela.
Ndifuna ukubona izixhobo ezicwangcisekileyo zokuyila izicwangciso
Ndiyasebenza kunye ne-Autocad kwaye ndingathanda ukuzama amathuluzi amnandi kunye nxamnye ngoko ndifuna ukuzama le nguqulo entsha
Antolin Arturo uthi:
Ndingayifumana njani i-autocad 2009 kwinethiwekhi ngaphandle kweendleko?
Ndiyifumana into enomdla ukuba i-autodesk yatshintsha yonke iminyaka ye-3
Kule dilesi kunokwenzeka ukuba ufumane i-free version kubafundi
Ndingumfundi ngaphakathi. yoluntu kwaye ndinomdla kwi-autocad 2009, nceda ungayilanda njani kwaye libiza kangakanani. Kubonakala kuphelele kakhulu
Ruben Oscar uthi:
Sawubona! Ndine-2008 CAD. Ndiya kuba nomdla ukwazi umxholo wale nto ukuhlaziya kum
rosendo cardenas martinez uthi:
Ndicinga ukuba unendlela enhle yokwenza ezi mpahla kwi-intanethi kubo bonke abasebenzisi abanomdla kwizakhiwo zanamhlanje zokuzihlaziya ngokwabo phakathi kwethu
Sawubona Freddy, imigaqo yale bhulogi ayivumeli ukuhanjiswa kweemveliso ezinobunikazi.
Kwaye akunakwenzeka ukuba umntu akuthumelele i-imeyile ifayile elolo hlobo. Into elungileyo kukufumana indlela yokufaka inkqubo yakho, mhlawumbi ngesidlali seDVD sangaphandle okanye kwenye ikhompyuter eneDVD esebenzayo.
Bhotani amanye kuvuthondaba kwikhondo mphandle kunye chazele kwezinye AutoCAD leyo unomdla kum comense ukufunda iincwadi apho ukuchaza ukusebenza kwayo isicelo kwaye kukugqala progarma elihle Ndayithenga ke amaxesha progarma 2 I-2006 kodwa ayizange isebenzele kum ngenxa yokuba i-dvd kwaye umfundi wam akayifunde kuya kukwazi ukuba ndiyithumele kwi-imeyile kwi-autocad 2009
Kuyamangalisa ukuba kukho abo bane-imeyile apho bangafumana ifayile ye-1.4 GB
URobert Yanangómez P. uthi:
Le nkqubo ilungile kakhulu ngoku ukuba ndifuna ukukhuphela enye yalezi zinto ukuba zenze uhlolo lwesigqibo njengomsebenzi oza kuncedisa kwaye ulondoloze ixesha kodwa andinakuyithumela kum indlela yokuyikhuphela?
URaul Wenceslao Ajxup uthi:
NdingumNjineli wezoLuntu, ndifuna i-autocad 2009, andinakuyifaka, nceda uyithumele kum imeyile. mbulela
ndincede, ndifuna i-autocad 2009 ngesiNgesi ngokukhawuleza!
nabani na onayo kwaye bayithumele kum, ndiya kukubulela kakhulu.
Molo ndiyathemba ukuba uza kundinceda ndikhuphele nceda ndiyabulela
IGNACIO ARZATE uthi:
Hello POEDAN Ndincede Ndiyathemba ukufaka khulula AUTOCARD 2009 kuba uyifake nzima kakhulu MNA. KUTHANDA
Le nkqubela kakuhle kakhulu ndiyathanda ukwenza iiprojekthi
Ndiyathemba ukufumana le nkqubo kuba kubaluleke kakhulu kum ukuba ndifunde. Kuhle kakhulu kwaye andinakukuthenga. bulela kakhulu
jhonny alexader uthi:
Bayi-MD kuba e-USA nase-Canada kuphela bayakuvumela ukuba ukhuphele le nkqubo kuba abayixhasi kwamanye amazwe ndivela eMexico.
Le programaaaa enhle kakhulu
Ndifuna ukukhuphela i-autocad 2009
luis gonzalez uthi:
Andikwazi ukukhuphela i-autocad
yiyona nto ibhetele
ORLANDO TORRES MEDINA uthi:
INKQUBO YIKHULU UFUNA UKUVUMELWA KUNYE KWENKQUBO YONYE
fabio marsiglia uthi:
Andizi nto kuba andizakuyilayisha
Ndithatha malunga neyure kwaye andifumananga nolu vavanyo lwezilingo kumntu ondibancedayo kwaye ukuba ngaba yiCAD eyaziwayo ngokuphucukayo
Rafael Almeida .. !! uthi:
Into engcono kakhulu ongayenza ukuhlala ixesha lakho elikhululekile .. !!
mario kain resendiz uthi:
Ndingathanda ukwenza lula ukukhuphela le ncwadi kodwa i-autocad iyinto enhle kakhulu kuthi
INKQUBO YOKUPHATHWA uthi:
KWEZIHLOKO EZIPHAKILEYO INKQUBO
NOKUBHUMA IZIQULUNKULU ZOKUSEBENZA.
Molo, ndibhala ndisuka eVenezuela, ndisebenza ne-autocad ukusukela kwinguqulelo ye-12 ye-MS-DOS kunye ne-UNIX, kwaye ndizamile zonke iinguqulelo kodwa kunzima kum ukuziqhelanisa no-2009 njengoko ndingakhange ndikwazi ukuya kwi-ofisi ngo-2007, kungenxa yenkqubo yemenyu efanayo, mhlawumbi kuya kufuneka utshintshe Yeparadicma lol, olona hlobo lubalaseleyo kum lube yi-r12, r14, 2000, 2005 kunye no-2008 kwimbono yam kunjalo, imibuliso ...
Laura: Imigaqo yale bhlog ayivumeli ukuba isoftware idluliselwe ngokungekho mthethweni.
Angie, obephethe igumbi lokulala, eposini ikhonkco apho unako ukufumana AutoCAD eboniswe, kodwa kufuneka ibe eUnited States okanye eKhanada, ezo amazwe apho uvumelekile ukuba zinokuwehlisa ukuba uvavanyo.
U-Alex, i-AutoCAD idinga kwiimfuno ezifunekayo ozifakileyo .network, ukuba ungayilanda kwiphepha leMicrosoft.
uncedo ugarcia uthi:
Ndingayinceda njani ikhululekile ukuyizama?
ndiyakunceda njani ukuba ndiyikhuphele kwaye ukuba ikhululekile Ndiyayilungisa i-auto cad
Magdalena Azcorra hdez. uthi:
LAURA YESSICA uthi:
Molo, ndingumfundi wobunjineli kwaye nangona ndimtsha koku ndiyazibuza ukuba ukhona umntu onokuthi andinike i-autoCARD ka-2004, enkosi!
I-NET ayifakwanga.I-Autocad 2009 ayinakho ngaphandle kweli candelo.
Inceda gqitha kum, ngoko ndagqiba ukuyikhuphela
yiprogram efanelekileyo, isixhobo esisisiseko sokuyila
UJuan Javier Mendoza uthi:
Inceda gqitha kum kuba ndiyinjini yoluntu kwaye ndizinikezele kwisakhiwo kwaye ndifuna ukuhlaziya
AJ CZ uthi:
reynaldo vera uthi:
Masithembele ukuba isebenza
Pedro Perez uthi:
Ndiyilungile ngokwenene kwinkqubo
Ndiyayiqonda ingxaki yakho yeJavier, kodwa ukuba ufunda ngokucacileyo, kucacile ukuba uhlala eCanada okanye eUnited States ungayilanda mahhala.
Andikwazi ukuchaza isizathu sokuba bachithe ixesha lakho xa besithi unokukhuphela iphepha elikhululekile kwaye akunjalo. Yiba ngakumbi.
marcos hereldo camacho uthi:
Ndifuna ukukhulula ukukhuphela i-autocad 2009 gacias
oswaldo almazan p. uthi:
Ndiyabona mna ndi-oswaldo yintoni endiyenzayo ukuze ndibulele i-autocad
hernan sanchez uthi:
ndiyabona njani ndifuna ukuba ndikhokele ukukhuphela i-autocad i-2009 mbulelo ngokuphulaphula
ezi zinto zilungileyo kakhulu
Ndiyaqonda ukuba uninzi lunomdla wokukhuphela i-AutoCAD, inani lamagqabantshintshi kule posi litsho njalo. Ndimele ndicacise ukuba imigaqo elawula le bhlog ayiyivumeli ukuba icaciswe ngendlela yokukhuphela isoftware ngokungekho semthethweni. Njengoko benditshilo ngaphambili, kukho iinkqubo ezinje Vuze enjongo yokukhuphela izinto ezivela kwiwebhu.
Ukuba oko kulandelwa kwiVuze kusemthethweni okanye kungekho mthethweni, kuwumthwalo womsebenzisi wale nkonzo.
Njengokuba sonke sibhala kule khasi sicela uncede ukukhuphela i-autocad 9, ndiya kubulela kakhulu
Ndiyazi ukuba yonke into ebomini ayikhululekile kodwa ndiyakuyiqonda yonke into
Ndiyintliziyo yabantu abavumela ukuba ndigcine ulwazi
ukuba bakwazi ukulanda le nkqubo ebaluleke kakhulu
Umsebenzi wam ondibanceda ukuba ndibulele uncedo kubo bonke-
abo babambisana nam
lupita ochoa de villegas uthi:
Le bine kulula ukuyisebenzisa kodwa andinakuyilanda kwaye ukuba ndiyayifuna ngokwenene, ngenxa yomsebenzi wam, ndiyavuya kakhulu ukuba ndibone ngubani onokuthumela ulwazi malunga nendlela yokukhuphela inkqubo.
Ndivumele ukuba ndikhuphe iprogram yamahhala kuba ndiyayifuna uthi:
Kubaluleke kakhulu ukukhuphela le nkqubo
Ndiyi-CHIDO KANYE Andikwazi ukuyikhupha kwaye NDINGAFUNA IJONGO UKUBA UKUBA UMNTU UNGAKUBA UKUBA
ithatha osorio uthi:
Umbuzo ocebileyo, asikhulumi ngombhali weentsuku zakho
umbuzo ongcono uthi:
Kuyinto enyanyekayo x akukho mntu ufuna le giles d **** **** **** penis
Zama nge vuze
Ndingayifumana njani i-autocad 2000
le padricimo ok
Kubonakala kukulungile kum, ukuba zidibanise ezi nkqubo
Zama ukusebenzisa Vuze
Iy ifuna ukukhuphela i-autocard ye-2008 kodwa andazi indlela yokuyikhuphela
kunye ne-vd ukuba ndiyayifuna, ndingayenza njani loo nto?
Kuhle kakhulu ukuba ndifuna ukufunda ngaphezulu. bulela kakhulu
Ndiyayidinga ngeenkqubo zokuchela umlilo
Ndingathanda ukufumana i-autoacad entsha, kuba bayandicela ukuba ndiqale ezinye izinto kwaye ndiza kuphambana ukuyifumana.
Ndiyabulela kwangaphambili, ndicela into efanayo. Siyabonga kwakhona
Le nkqubo evuyisayo yinto enomdla kuthi abakhi bezakhiwo bakunikeza uninzi lwe-aserization kunye nenyaniso, kunye nabo unikezela ukuvakalisa oko ucinga ngako
i-autocad iyisisombululo esilungileyo sefantasta
Juan Antonio Mora uthi:
i-autocad iyisisiseko esisisiseko sokwakheka komklamo njengoko lusenza ukuba sondele ngakumbi kwinyani.
Ndingathanda ukuba ngumhla we-Agung i-aruitecta Ndigqibe esikolweni kwaye ndiya kuYunivesithi ndifuna ukuba ngumyili wezakhiwo. Ndingathanda ukufunda kunye ne-autocad
Le nkqubo intle kakhulu kwaye inceda kakhulu kwiinjineli kunye nabacwangcisi
samuel saban uthi:
Yona iphambili kakhulu kwaye isebenza ngokugqibeleleyo
Hello Angel, Nalu uluhlu lwamanani.
Nangona efanelekileyo kakhulu kukuba kwiphepha le-AutoDesk fumanisa umthengisi welizwe lakho kunye namaxabiso acatshulwa ngqo nabo.
ingelosi yahlala uthi:
Yintoni ixabiso lenkqubo ye-autocad 2009 ngeSpanish.
Ndingumakhi wezakhiwo, ndifuna ukwenza i-4 kwinkqubo ye-autonad 2009 ngesiSpanish, loo vaolr
Ndiyabulela i-autoCAD ngokuthatha ingxaki ukuyikhuphela kum ukuba andikwazi ukusebenza enkosi
Ndifuna ukuzama i-2009 autoCAD kwaye ndonwabele i-ele ele
i-hilas iphenye i-autocad i-2009 kwaye ndiyakwenza izicwangciso zesiteyithi kwaye yaphuma njengoko i-plane
uncede bonke abo bahle kakhulu kule nkqubo ndifuna ukwazi xa kulandelwa inkqubo kwi-intanethi kwaye ndinayo kwi-pc njengoko ndenzayo ukuba ndiwusebenzise xa ndingayazi iikhowudi zokuqalisa okanye oku kufakwe kwi-download if it is so Ndingathanda umntu ukuba andichazele kum ngokubonga ngokuthatha ingxaki
KUNYE NOKUBALULEKILEYO KUNYE NOKUBA NDIYA KUCHINTSA KANYE OKUNYE IZIKOLO KUNYE UKUBHALA KWE-PROGRAM
Thumela? I-AutoCAD 2009 inobunzima be-1.34 GB ...
Isofthiwe kufuneka ibe bhetele kuneenguqu zangaphambili, ngakumbi kwi-3D
Ndithumele isoftware ye-autocad 2009, andikwazi ukuyikhuphela
ARMANDO ESPINOSA uthi:
Ndingathanda ukwazi apho ndiyakwazi ukukhuphela imoto ye-cad ezamahala kodwa yenza kube lula kuba ndizamile iindawo ezininzi kwaye andinakuzikhuphela
apho ndiyakwazi ukukhuphela i-autocad 2009 mahhala kwaye kulula ukuyilanda ngenxa yokuba uzame ukuyilanda kwiindawo ezahlukeneyo kwaye kunzima kakhulu
umntu unokundinceda .. kwaye ndixelele indlela yokukhuphela i-autocad 2009 ..
Ndiyidinga ngokukhawuleza ..
Ukumisa uGarcia uthi:
Ndifuna inkqubo yokwakha izitratato kunye neendlela endingazisebenzisa ukuyikhangela
ukuba ****** akunakuncedo, cima yonke intambo ye ************
Ndifuna i-autocad 2009, kuba ndingumfundi woyilo ...
URichard O. uthi:
Ndingathanda ukulawula i-2009 ngenxa yokuba ndiyathanda ukudweba iiplanethi nokuthetha izinto
HERNANDO MOLANO uthi:
BESE NDIPHATHALELA I-AUTOCAD UKUSUSELA NGONYAKA WAMA-90 kwaye NDIYAZI INKQUBO YOKUQHUBA INKQUBO…. NAKUBA KUNINZI IINKQUBO ZE-CAD NAMHLANJE - EZINYE ZILUNGILE KAKHULU- NDIQWALASELA I-AUTOCAD… .. IPOPA YABO BONKE. YINKQUBO EMAYENZIWE UKUHLONISHWA NOKUXABISWA KWIXESHA LAYO UKUBA LISETYENZISWE KWILUPHI UMSEBENZI WOKUYILA.
UMSEBENZI WAM WAM NGOKU UKUPHAKATHI KWESIKHALI 3D…. NGOKUQINISEKILEYO INKQUBO EBALULEKILEYO
Uncedo olu lule nkqubo ndiyathanda ukuba unokwenza izinto ezininzi kunye nalo kwaye ndifuna ukuba nalo kwaye ndilisebenzise
nceda ungazi indlela yokukhuphela i-autocad Ndingathanda ukuyikhuphela njengendlela yokukhuphela
Asikwazi ukucebisa ubuqhetseba besoftware, ngemithetho yale bhlog ... sinyusa indlela yokwenza ngeakhawunti yaseyunivesithi, okanye ngokukhuphela okuvunyelwe yi-AutoDesk.
Nangona kunjalo, ukuba into oyifunayo ukuyikhuphela ... I-Rapidshare kwaye ezi ziqonga zinikezelwe kuloo nto, kufuneka nje uthayiphe kwiGoogle "i-rapidshare yokukhuphela i-AutoCAD 2009" kwaye uqhubeke ngomngcipheko wakho.
Uyabona, kuyamangalisa ukuba sizenzele i-2009 kwiVenezuela, nceda, ungayithumela kum, andinakukwazi ukuyikhupha!
NGOKUKHETHA NGENDLULE I-AUTOCAD
NJE NDIYE NESESITANDO MUCHO
Ndifuna ukuhamba nge-autocad 2009 endikumele ndiyenze ukuze f
sergio hiriart uthi:
22 / julio / 2008 Ndingathanda ukufunda i-AutoCad 2009, ndicinga ukuba iya kuqhuba umsebenzi wam, siyabonga.
Ndingathanda ukwazi ukuba ndingayilanda njani inkqubo ye-autocad14. Ndiyabonga
Ndingathanda ukwazi ukuba uphuma njani?
Eduardo Pacheco uthi:
Ndingathanda ukufunda i-AutoCad 2009, ndicinga ukuba iya kubakhokelela kum umsebenzi wam, siyabonga.
omar restrepo uthi:
Mna tegnologo e costrucciones waseburhulumenteni kodwa basondele izakhiwo zam umsebenzi sisinyithi nabanezinto ezingaqhelekanga Uhanjiso iziselo uxinzelelo oluphezulu nceda i udinga AutoCAD gracis
Ndisebenzisa i-autocad ye-2004 kodwa ndifuna ukuqala ukusebenzisa i-autocad ye-2009 phambi koyilo
UMarta SP uthi:
Ndingathanda inkqubo eyisisiseko ye-autocad FREE kwaye isebenza ngokuchanekileyo kwaye ithatha ngesandla, ukuba ndizise ngakumbi kwi-CAD, Ndiyakuhalalisa ngeendlela ezininzi ozikhethayo.
kuphelisa inwele uthi:
Eyona nto inqwenelekayo ndifuna ulwazi oluthe xaxa malunga ne-autocad 2006, ekubeni ndiyi-designer designer esebenza ne-cad
Ukubulisa andikwazi ukukhuphela i-car cad 2009.
mmm, kufanelekile ukuba isebenze njengayo nayiphi na enye inkqubo yokufaka. Kungenzeka ukuba xa ikhutshiwe ayikhuphelanga ngokupheleleyo ... ukhetho olunye kukuyikhuphela kwakhona.
sandra maritza perez uthi:
Ndiyabulela ngokuba uyithumela kum kwaye ndicinga ukuba kubalulekile ukuba nale nkcazelo; kodwa ndafumana ingxaki encinane njengoko ndayilanda kwikhompyutheni yam kodwa andinakuyivula. Baye bandicebisa indlela yokuyivula okanye ukuyilanda ngenxa yokuba ndiyenzile.
Ndiyifumana umdla kakhulu kodwa ndifuna inkqubo ye-autocad ye-newbies kuba ndiyazi nje ukuba yi-autocad
molo mna nomdla wokufunda AutoCAD, mna umfundi izakhiwo yaye ndathunyelwa ukwenza umsebenzi kwesicwangciso kwindlu 2D kunye 3D kodwa hayi indlela yokwenza ukuba andikwazi kukunceda mna singakuvuyela ukuba ungathumela iposi yam moya ka indlu kwaye bayichazela yona inyathelo ngesinyathelo ndiza kukubulela ngqalelo yakho kwaye ndiyathemba ukuba unako ukuncedisa ngokwenene xa sifunda ngathi asikwazi nto kwaye njengoko siqhubeka phambili sifunda kwaye sifuna ukwabelana ngolwazi lwethu nabanye kodwa kwimeko yam Ndiyayifuna ngokwenene uncedo
chrstian Navarro M. uthi:
Ndiyifumana into enomdla kakhulu kwaye ilungile kwabo bafuna ukufunda kulezo ndizibandakanya
Raúl A. uthi:
I-AUTOCAD yinkqubo engaqhelekanga kwaye kufanelekile ukuba kukho umdla ongaka wokuyifunda. Kodwa ndicebisa ukuba abanye bachithe ixesha labo elincinci begqibelelisa upelo lwabo: awukwazi ukubhala "ngamanyundululu" amaninzi ...
ngxaki .c uthi:
molo ndingathanda ukufumana inguqulelo entsha ye-auctocad
Sawubona ndifuna ukwazi ukuba i-AutoCAD iphathwa njani,
Ewe! Ndayifakile i-URL ngokungalunganga. lo http://www.anonymizer.com Bendino "n" oshiyekileyo. Uxolo.
manuel federico muñoz v uthi:
I-AUTOCAD, yinkqubo ebalulekileyo kunye neyayixabisa imisebenzi yam Isayensi. Ndifuna ukusebenzisa izicelo zam grafing zokufundisa nokufunda kweemathematika. I-didactics yeemathematika, ngekhulu leshumi elinesithoba elinesixhenxe, yatshintsha kakhulu. Oku kuba graficaba ukuvavanya ukuba isonjululwe kakuhle ingxaki zemathematika akukho wumbi. Kodwa ndiyacinga njengabafundisi owayesakuba zezibalo ezinokuthi inciar ukufundisa imathematika kunye grficación, okanye ukuzoba iingxelo, neziphakamiso okanye imiba phambi kokuba ngokuvakalisa iifomyula zemathematika. Ngenxa yalo msebenzi ndithathile ubuchule be-graficaciones ngoncedo lwe-AUTOCAD. Ndiyathemba ezinye iingcebiso ezivela kubaqeqeshi kule ndawo.
elona liphezulu- ndingathanda ukukhuphela le nguqulo
Wow, ukuba andingazi: O
Bangakwazi ukuhamba nge-Annonymizer ( http://www.annonymizer.com ). Ngendlela ehlala njalo, ihlale ip yakho ivela kumthengisi wase-US. Ndalanda i-autocad ye-2009 ngelixa e-Mexico, iparadesi yokwenza ubuqhetseba. 😆
Ndingathanda ukukhuphela i-autocad 9
EDEN SANCHEZ PEREZ uthi:
KUYA KUFUNEKA KUKHULU UKUPHILA UKUPHILA KWIJONGO LOKUPHILA
Ndingathanda ukufunda le nkqubo, Ndingathanda ukuba ungathumela i-video tutorials ze-AUTO CAD
jose corvalan uthi:
i-imeyile yam iphela "DI" oku kuthetha umzobo wekhompyutheni, ndisebenza kunye ne-2007 kwaye ngokunyanisekileyo ndifuna ukuqhubela phambili kuyo, yingakho kufuneka ndikhuphe i-autocad 2009 kunye nazo zonke iimpawu zayo ezintsha.
Eyona, makhe sibone into entsha kule sixhobo kwaye oko kuququzelela umsebenzi.
ndiyikhuphele kanjani mmmmmm
Khangela, ndiyaqonda ukuba into ebathanda ngayo kukuba i-imeyile yakho iphela .edu
ngoko uzame uze usitshele
Jesenia Lucia Castellon M uthi:
Ndinomdla kakhulu ukufumana inkqubo, kodwa kufuneka ukwazi ukuba akukho zithintelo malunga akhawunti cn ofUniversidad, okt ukuba ngaba isicelo kulo naliphi na ilizwe, porq Ndisuka Nicaragua
Ndifuna ukwazi ukuba i-akhawunti yaseyunivesithi ayinayo imingcele, oko kukuthi, ukuba ingaba nawaphi na ilizwe, ndivela eNicaragua
RAMON ANTONIO uthi:
Ndiyayixabisa ukuhanjiswa kweempawu ezintsha ze-AutoCAD 2009 inguqulo yeSpanish.
UJuan Luis uthi:
Oogxa be-architecture ndafunda izimvo zakho ze-autocad 2009 kwaye ndifuna ukuba nekopi kuba ndiyathanda ukuyila kwaye andinalo iyanconywa kwezoqoqosho ukuze ndiyithokoze
Ricardo Cano uthi:
Ndiyincoma kubantu abanomnqweno wokuzoba umzobo.
Yinkqubo eyenzelwe abakhi bezophuhliso ezingcono, ngenxa yolu cwangciso ndiphuculwe kwimiba yobungcali ngenxa yeebhenti ezinikezelayo.
ivan quispe uthi:
?????????????????????????????????? a yiqondi?
IYA KUBHEKA NJENGOBA, UKUBA UZA AMAXA
Ndingathanda ukufunda ukuyisebenzisa malunga nemilinganiselo emithathu
Mhlawumbi umntu unokundicebisa ngokunxulumene nesi sihloko.
uyilanda njani ????
Ndilungile kodwa ndifuna ukwazi ukuyikhuphela
engekho bernardo uthi:
Uyabona njani, kakuhle ndiyindoda efuna ukufunda ngakumbi. Ndiya kucela ukuba ndithumele i-autocad.
Ndiyabonga ngenxa yobubele babo.
Ukuba ndiyikhuphele le nguqulo, ayichaphazeli le bendisele ndiyifakile ukusuka ngo-2008 ...?
ngoku ukhutshelwe kanye ... .. oku kulandelayo:
Ndingaba nexesha elingakanani?
ukuba akunjalo, ndenza ntoni ukuze ndenze njalo… ..?
ukuba unomdla, kodwa ndingayilondoloza njani kwikhompyutheni yam?
ukuba unomdla, kodwa ndingayifumana njani?
Sawuncede, nceda umntu ondikuncede ukuba ndilande njani uhlolo olutsha ngokuzenzekelayo, unokundinceda ndibulele.
UAlejandro Mendoza uthi:
Oku kuyamangalisa kodwa ndifuna ukwazi ukuba ungayikhuphela njani le nguqulo ukuba kunokwenzeka undithumelele ulwazi enkosi ...
Nceda ugcine undigunyazisile malunga neendaba ze-autocad zam zakutshanje ndiyinjineli yoluntu kwi-cd obregon sonora mexico
jose diaz aphadia (Bolivia) uthi:
Ndiyabuza ngubani ongathumela i-aurocad i-imeyili ye-2009 kunye nevidiyo yokufunda.
marlon marenco uthi:
kwidolophu yam ukuba ibe yindawo efihliweyo kakhulu asikwazi ukufikelela kulolu hlobo lwenkqubo, ndiyathemba ngelinye ilanga uya kundivumela ukuba ndikwazi umkhiqizo, ngenxa yokuba uncedo oluphantsi kakhulu andinakuwuthenga
Unomdla kakhulu ukufunda izinto ezintsha
elkin martinez mora uthi:
Ndingumchwephesha wokwakha ubugcisa, kodwa andizange ndikwazi ukuqhuba ibhasi kwaye ndicinga ukuba kubaluleke kakhulu kwaye unomdla wokufunda.
Ndiyathemba ukuba baya kundicebisa okanye bachaze indlela endiyenzayo ukuze ndikwazi ukufikelela kwinkqubo.
jose jose uthi:
Ndifuna i-autocad inguqulo yakutsha nceda
Ukuze ukwazi ukukhuphela iiprogram zale fom kwaye ufanise ukuba sixhuma kwi-USA, kufuneka sikhuphe inkqubo elandelayo ye-Windows nayo yonke into ngaphandle kweengxaki. Shield Hotspot
OSCAR PINEDA uthi:
IYA KUBONA UKUBA KUNYE KUNYE NGOKUBA SIPHELEKILEYO SINGENAKHUMANA NEMISEBENZI YOKUBA I-AUTOCAD
CLAUDIO MUGUEL uthi:
INKQUBO YI-CHIDO YAKHULU KUKHULULELA IZINDAWO
LUIS ANGEL uthi:
Kulunge kakhulu kodwa ndingalukhuphela njani uvavanyo okanye uhlobo lovavanyo ... nceda uthumele umyalezo kwi-imeyile yam ... ndiyayixabisa ...
Ukukhethwa ngeempawu, AutoCAD - Microstation